Maitiro ekuwana iyo yepakati chigunwe emoji yeWhatsApp | IPhone nhau
Maitiro ekuwana iyo yepakati chigunwe emoji yeWhatsApp
Panguva ino, uye isu hatizive kusvika riinhi, Apple haitibvumidze kushandisa iyo wepakati chigunwe emoji hapana app. Ivo vanofanirwa kufunga kuti kwakashata chiito chekuwedzera, kunyangwe yakawanda yenguva isu tichizoishandisa sejee neshamwari dzedu. Iyo "comb" emoji ndiyo icon iyo vashandisi vakakumbira zvakanyanya asi, sekunge neSpock emoji, Apple haisati yazvipira kuti iwedzere. Zvisinei, pane nzira yekuzviita, kunyangwe kwechinguvana inoshanda chete muWhatsApp chats.
Iyo nzira yekuiwana yakafanana nenzira inoshandiswa kutora Spock emoji, nemusiyano wekuti wepakati chigunwe emoji inowanikwa mune WhatsApp yewebhu vhezheni. Kana iwe uchida kutumira shamwari dzako kuti ufambe, iwe unongofanirwa kutevedzera anotevera matanho.
Tiri kuenda web.whatsapp.com kubva kukomputa yedu.
Isu tinovhura hurukuro.
Isu tinobaya paiyo emoji icon, tsvaga wepakati chigunwe uye wotumira.
Kubva ku iPhone, isu tinovhura chat yatakange tatumira uye kuteedzera emoji yemunwe wepakati.
Isu tinoenda kuZvirongwa / General / Khibhodi / Ekukurumidza mabasa.
Isu tinobata iyo yekuwedzera chiratidzo (+).
Isu tinonama iyo emoji uye nekuwedzera inokurumidza basa ratinozonyora kukumbira iyo emoji.
Isu tinobata kusevha.
Dzokorora maitiro eaya ese mavara isu atinoda kuchengetedza.
Kuti uishandise, iwe unongofanirwa kunyora nekukurumidza mashandiro muWhatsApp chat. Sezvauchaona, kana uchinyora zviratidzo zvinoshamisa zvinoonekwa asi, kana iwe ukaitumira, ino decode uye inobuda zvakakwana. Chinhu chakashata ndechekuti haienderane nechero imwe application asi, apo isu takamirira Apple kuti iwedzere natively, chimwe chinhu chimwe chinhu. Zvirinani kubva kuWhatsApp tinokwanisa kutumira shamwari dzedu uye kwete shamwari kudaro kukwira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuwana iyo yepakati chigunwe emoji yeWhatsApp
Kutenda nemupiro, asi ini ndaita maitiro ese, uye musikana wangu anowana iwo maviri maeni zviratidzo, hahaha, ndatenda kunaka 😉
Ini ndakadzokorora zvese uye zvinoto shanda zvakaringana, zvinoonekwa kuti ini ndakaita chakashata pandakateedzera emoticon. Ndinoziva kuti zvinoshanda nekuda kwemhinduro yakauya kwandiri kubva kumusikana wangu hahaha. Ndatenda.
tsamba macron akadaro
Fernando, musikana wako anofanirwa kugadzirisa iyo whatsapp kuti ive yazvino vhezheni 2.12.6, kana achinge azviita anokwanisa kuona munwe wepakati !!. Kumbundirana!
Chinhu chimwe chete, "wepakati munwe" ane zita, moyo, kana zvakadaro ini ndinofunga
Mhoro jot. Ini ndoziva chinonzi munwe uyo, asi haisi iyo "yepakati munwe" icon. Iine mamwe mazita asingafanire kuiswa 😉 ndinodana yangu ine mavara "atpc", asi izvo hazviratidzike zvakanaka pane yeruzhinji peji rewebhu.
Ini ndinozviita sezvazvinotaura asi zvinoita sekunge emoji haigone kuwedzerwa nenzira pfupi.
TARISA IZVI IZVI MUMUMESI
Pindura kune hello
Zvakanaka !!! zvakandishandira kekutanga
Maitiro ekugadzirisa matambudziko neWi-Fi muIOS 8.4.1
Maitiro ekugadzira boka revanosangana pane iyo iPhone